Josep Maria Bartomeu oo si cad kaga hadlay mustaqbalka Lionel Messi ee kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 06 Agoosto 2020. Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa ka hadlay mustaqbalka Lionel Messi ee Blaugrana, wuxuuna xaqiijiyay inuu doonayo in xirfadiisa kubadda cagta ku soo afjaro naadiga Barca.
Haddalka Josep Maria Bartomeu ayaa yimid kaddib markii ay soo baxeen warar ku saabsan in la gaaray xilligii uu Lionel Messi ka tagi lahaa kooxda Barcelona, waxaana lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqi doono kooxda reer Talyaani ee Inter Milan.
Haddaba sida uu shaaca ka qaaday wargeyska “AS” Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa yiri:
“Anigu ma ihi qofka kaliya ee sidaan dhahaya, Messi sidoo kale wuxuu sheegay inuu doonayo inuu ku soo afjaro xirfadiisa kubadda cagta kooxda Barcelona”.
“Shaki iigama jiro in marka uu Messi soo gabagabeyn doono xirfadiisa kubadda cagta seddex ama afar sano gudaheed, inuu joogi doono halkan Barcelona”.
“Wey u cadeed Messi arrintan tan iyo markii uu yaraa, wuu yaqaanaa midabada kooxda Barcelona, wuxuuna qeyb ka yahay taariikhda kooxda”.
“Messi waa ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, kaliya ma ahan xilligan, balse waa taariikhda isboortiga, wuxuu joogaa Barcelona, wuxuuna si cad u sheegay inuu doonayo inuu halkaan sii joogo”.